Ny Tantsaha no ataovy fakahan-tahaka raha te hampitombo ny fidiram-bola - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Otran’ny hafahafa ihany zany an, ny any ambanivohitra aza miakatra aty amin’y ville fa mba te hitady passe koa ahoana moa reo no alaina tahaka!! Andeha hidina any ambanivohitra, ambanivolo, ambala zan manao formation raha zany. Oui, izay mihitsy, mandehana any mba mianatra mamboly, miompy sns. Azavaiko izay rehefa aveo fa mialoha an’izay aloha dia hiresaka momban’ity vola ity aho.
« L’argent ne fait pas le bonheur », Omeo ahy aty hikarakarako azy
Raha vao vola no resahana dia samy manana ny heviny ny tsirairay avy ao ny milaza rehefa manana ny ampy aho hiveloman’ny ankohonako sy hanampiako ny ory dia ampy ahy izay, ao koa ny sasany milaza tena ilaiko mitsy io ka, zah ary io mba maniry ho milliardaire. Safidin’ny tsirairay avy iny fa tsy hidirako lalina fa raha amiko manokana dia ny « Le bonheur fait l’argent et l’argent donne de la liberté de choix ». Raha misy ny vola afaka manofa trano lafo na mividy mihitsy, hampianarina any amin’ny ecole française ny zanaka fa tsy amin’ny EPP, mividy entana sy kozakozan-tokantrano lafo, mitsangatsangana etsy sy eroa. Ny fahasambarako tamin’ireo efa nananako sy ny javatra efa azoko na koa reve efa navadiko realité nahatonga vola tonga hoazy teo amiko sy ny zavatra tsara betsaka, de mila sambatra bebe kokoa aho izany mba ahafahako mahazo vola betsaka sy ny javatra ilaiko hafa maro. Ny tiana tenenina amin’izany rehefa sambasambatra ianao dia manantona hoazy ny zavatra tsara ary raha malahelohelo de manantona hoazy koa ny ratsy rehetra. Tsy efa tsapanareo ve izany? Raha falifaly vao maraina de otran’ny mandeha hoazy ny zava-drehetra? Rehefa Vendredi de otran’ny vetivety ny andro satria efa falifaly tsy hiasa samedi de raha Lundi mafy be hoan’ny ankamaroan’olona satria vao mifoha maraina dia ny ao an-doha: Lundi koa. de manaraka an’iny ny tontolon’andro, de ela be vao ariva ny andro.
Tambanivohitra no atao vitrine, ahoana zany???
Raha vao resaka vola no resahana dia tonga te hanambola be eo no eo ny sasany, te hanakarena aingana, tonde miazakazaka be ny orin’asa sns, any amin’ny film ngamba izany no possible. Fa raha azavaina aminy ny lalana arahiny dia kivy de miverin-dalana. Ohatra matavy tapaka ity fa tsy de tena mitovy lotra, hoe iza no te hoany @ paradisa: Zah Zah Zah. Nefa tsy maintsy hofaty aloha vao mankany dia miala tsirairay.
Fa ny fika mahomby dua manao toy ny reo tambanivohitra ireo « Manome vao mandray », « Miasa mafy izy vao mihoty vokatra ». Mba ainareo moa ny atao rehefa mamboly vary? Ny olana amintsika mantsy rehefa mandray vao te hizara. Omeo aloha aho vao mieritreritra hanome anao aho. Amin’ny resaka entreprenariat nefa mifanohitra amin’izay mihitsy, mila fantarinao ny besoin reo cible-nao ireo, dia mamorona produit arakarak’izay, dia apres vao mihoty vokatra. Sendra misy valala, rivo-doza sns, tsy kivy ireo tambanivohitra ireo fa manohy hatrany ny asa fivelomany. Dia ianao koa na dia inona ny atrehanao eo dia tohizo foana ny lalana fa izay no mitarika anao @ succès. Fa tsy vao misy olana kely de azanoko ity fa tsy azahoana tombony fa hitady bizina hafa indray aho, dia lany mitady bizina hafa ny fiananao izany. Fa ny efa natomboka no tohizo, izay moa no mahita fa mety au moment hotafa anie ianao kivy iny de hanomboka lalana vaovao indray. Ohatran’ny manao trano zany defa akaiky hovita de hoe tsy mety amiko indray ty trano ty fa aleo ravana. Rehefa tsy mety ny hevitra voalohany dia mitadiava fika vaovao indray, dia raha mbola tsy mety indray iny de mijerea hafa indray fa izay no lalana ahatafa anao : « Perseverance, endurcis, courage ».
Famintinana: jereo ny besoin marché, client de mamorona produit, service na communication mifanandrify amin’iny dia tonga hoazy ny vola. Fa ny any ankamaroantsika mantsy mieritreritra hoe volako no miasa amin’io, orinasako io de izay tiako atao sy metimety amiko no atao. Page Facebook io na koa site web ko io, dia izay tiako ihany. Hoan’ny kil no anaovana anreo de jereo zay metimety aminy, manaova test betsaka fa à partir zay test izay no ahitanao ny tena mety @ client-nao.
« C’est en partageant qu’on pourra tous évoluer »
Bizina en ligne: azo atao tsara miketrika tsisy vola ! 0,00 Ar fond de démarrage